Free Download Pro for Mac TechTool | MacArsenal
> Resource > Mac > Micromat TechTool Pro for Mac
TechTool Pro? Waa codsi dhamaystiran utility oo ka mid ah fursadaha loo baaro iyo dayactir, soo kabashada xogta, iyo dayactirka (oo ay ku jiraan defragmentation disk). Waxa kaliya ee aad u baahan tahay inaad guji jiirka si ay u qabtaan Suite ah oo dhan-wareega ah ee imtixaanka ku drives ku lifaaqan iyo hardware of your computer. Idinkuna ma waxaad u baahan tahay inaad soo iibsato software dheeraad ah si aad computer socda ee ay ugu fiican. Dhab ahaantii, waa wax wanaagsan in Apple ayaa nuqul ka mid ah ay walaalaha, TechTool Deluxe, qorshaha ay AppleCare Protection.?
Bioscience and Repair?
Iyadoo mid ka mid click of mouse ka, TechTool Pro? Isticmaali kartaa feature Check Computer ah si loo sameeyo baadhitaan dhamaystiran Baadhista ah drives adag Mac formatted iyo kombiyuutarka. Tani waxaa ku jira imtixaan SMART of geliyo drive computer ee adag tahay in la hubiyo failure badan tahay drive, jeeg ee tusaha disk ah, imtixaan ee RAM computer ee la heli karo, iyo qaar ka mid ah oo dheeraad ah. Talo waxaa la siiyaa oo ku saabsan sida loo farsameeyo inay cusboonaysiiyaan dhibaatada haddii arrimaha loo soo ban dhigay. Baadhitaan ku Computer in si joogto ah loo isticmaali karaa oo qayb ka ah codsi dayactir ka hortag ah.?
Waxaa jira dhowr hab ee soo kabashada xogta ku TechTool Pro. Haddii aad rabto in aad soo kabsado xogta laga eryi kharribeen aan buuraha ku desktop-ka, waxaad isticmaali kartaa Tech Tool Pro. Waxa kale oo ay ku badbaadin karto xogta meel kale. By isticmaalaya History qashinka, TechTool Pro helida goobta files tirtiray oo loo kordhiyo suuragalnimada in ay dib u soo kabashada hoos xaaladda tirtirka marmar.?
TechTool Pro qaban kartaa mugga iyo ayna file labadaba. Ayna Volume xoojisaa meel bannaan oo lacag la'aan ah oo ah drive adag. File ayna xoojisaa file kasta oo shakhsi ah xaafadda xadadka ee drive ee adag. Optimizing nayaa khariidad lagu kaydiyo galka iyo kor u qaab oo dhan aad drives.
Apple Final Goo Express u Mac